Ipensile ka-Felissimo engama-500 isetwe njengezinto zokuhombisa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ipensile ka-Felissimo engama-500 isetwe njengezinto zokuhombisa
UMelisa Perrotta | | Abadlali, Ukuphefumlelwa, Amaqhinga
Ngaba wakhe wacinga ukuba uneepensile ezininzi ezinemibala kwaye yayilihlazo ukuba zigcinwe kude okanye ziyadika ngaphezulu kwedesika? Kule nqaku sikubonisa ukuba yintoni a uphawu lweepensile ezinemibala ezenziwe ukubonisa iimveliso zazo ngendlela enomtsalane.
ndonwabile luphawu endilwenzileyo ngo-1992 ingqokelela enkulu yeepensile ezinemibala emhlabeni. Isebenza ngokusekwe kwimiyalelo yamaxesha ngamaxesha yokuthumela iiseti zasekhaya ezinemibala engama-20 eyeyiphalethi ethile. Ezi palettes ziqulathe imibala eqinileyo, ebengezelayo, eyelwayo kunye neyentsimbi. Zenziwe ngeeyunithi ezingama-500 zeepensile ezimile isikwere nganye inegama elikhuthazayo elihambelana nombala.
Ngesinye isihlandlo ukubonisa kunye cwangcisa imveliso yakho iziseko ezenziweyo ezenziwe ngobuchule ukuze zisetyenziswe ngokulula. Kwelinye icala, ekubeni ingqokelela epheleleyo enjalo, wayefuna ukuba zisebenze njengezinto zokuhombisa ezinomtsalane ngobuhle.
Ngokujonga kwimiboniso yeepensile eyenziwe nguFelissimo yokuqokelela kwakhe imibala sinokubona ukuba zenziwe njani ukuba zisebenze ngenjongo yombutho. Nangona kunjalo, bakwazile imveliso yesibini enomdla kakhulu.
Iipensile zihlala ziyinto elahlekayo kunye nokuwa, okuphela kokonakalisa ukukhokelela. Ukongeza, amaxesha amaninzi eminye imibala iyeka ukusetyenziswa kuba ingabonakali. Ke ngoko, uphawu lucinga ngononophelo malunga nokusetyenziswa ngumthengi. Ngale ndlela, izama ukwenza lula ukusetyenziswa kwenkqubo evumela ukujonga nokufumana imveliso ngokukhawuleza.
1 Bonisa iokhestra
2 Umboniso weAurora
3 Bonisa umbala weWave
Owona mboniso ulula «Orchestra» unokuba udonga lubekwe ngokokukhetha komsebenzisi. Oku kuvumela iipensile ukuba zibekwe nkqo kwezi ziseko zithe tyaba ezinokudityaniswa kunye.
Ukubonisa kokunyusa «Orchestra» imibala
I-Aurora yindawo yokuma esebenza ngaphezulu kwayo nayiphi na into ukubonisa iipensile ezingama-500. Isebenza njenge imeko yokubonisa exhasa kwaye igcina ezi zinto zinemibala ngohlobo lokubonisa. Ngale ndlela iba ngumsebenzi wobugcisa wangoku.
Iipensile zombala zeFelissimo ezibekwe eludongeni
Bonisa umbala weWave
Lo mboniso wenziwe ngamalungu amancinci angenisiweyo zenziwe ngobuqhetseba kwaye zigobile ukuze zivelise imifanekiso eqingqiweyo yeepensile. Kwelinye icala, ikwavumela ukuba ukhethe ukuba mangaphi amaqhekeza oza kuwasebenzisa, ukulungele ukukhetha uluhlu oluthile lombala ukuze ukwazi ukuluhambisa ngeebhloko zombala. Ikwavumela ukuba usonge yonke ingqokelela yokuphatha ngokulula.
Umgcini we-Wave weepensile zeFelissimo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ipensile ka-Felissimo engama-500 isetwe njengezinto zokuhombisa
Ezi zixhobo zintlanu ziya kukuhlangula kukudinwa kokuyila